Xigasho: Saraakiisha ciidamada ee diiday muddo kordhinta ayaa soo saaray go’aamo cusub - Axadle – Axadle
Xigasho: Saraakiisha ciidamada ee diiday muddo kordhinta ayaa soo saaray go’aamo cusub – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Saraakiisha hogaamineysa ciidamada nabad sugida qaranka ee ka dhashay mudo kordhinta dowlada ayaa shalay kulan ay ku yeesheen Caasimadda Muqdisho waxay ka soo saareen qodobo muhiim ah sida aan xogta ku helnay.
Saraakiisha ay ka mid yihiin Indha-Cadde, Saney Cabdulle, Saadaq John, Cabdimaalik Ismaaciil iyo Cismaan Xaadoole ayaa isku raacay in la sugo amniga Caasimadda Muqdisho, gaar ahaan goobahooda, lana hubiyo in aan wax rasaas ahi dhicin oo aan rayidka wax ku noqon.
Saraakiisha ayaa sheegaya in caqliga fayoobi uu ka hortagayo in ciidamada xoojinta sharciga lagu soo celiyo gacanta taliyeyaasha cadaawada iyo cadaawada leh, kuwaas oo bartilmaameedsan kara.
“Tani waxay go’aamin doontaa in Rooble uu beddeli doono taliyeyaasha ku lugta leh dagaalladii,” ayay saraakiishii ka sheegeen kulanka.
Raiisel wasaare Rooble wali ma uusan qaadin wax ficil ah oo uu ku muujinayo inuu yahay masuul ka madaxbanaan Farmaajo, dhexdhexaadna ka ah arimaha muranka badan dhaliyay wuxuuna ka aamusay aargoosiga ay durba bilaabeen xoogaga ka soo horjeeda waqtiga kordhinta.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Axadle u xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ay amar ku bixisay in mushaaraadka laga qaado askarta iyo saraakiisha ku soo biirtay xoogaga ka soo horjeedka muddo kordhinta kana qeyb qaatay dagaalladii ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Xogta aan helnay ayaa muujineysa in amar ka soo baxay madaxweynaha uu joojiyay lacagihii la siin jiray ciidamada iyo saraakiisha ka soo horjeeday muddo kordhinta, waxaana sababta ay tahay inay ku biireen mucaaradka. Waxay kaloo amartay in laga baxo saraakiishan iyo askartan.
Hordhac: Man Metropolis vs PSG – Rikoodhadoodii Hore, Shaqada Adag Ee U